Pejy fandokoana maimaimpoana amin'ny paska, paska ary atody paska
Ny Paka dia ankalazaina amin'ny volana fenomanana voalohany amin'ny lohataona. Tsy misy daty marina. Satria tsy toy ny Krismasy, izay atao amin'ny andro raikitra amin'ny taona, ity dia festival mampihetsi-po. Mitatra mandritra ny andro Alakamisy Maundy, Zoma Masina, Sabotsy Masina, Alahady Paska ary Alatsinain'ny Paska.
Matetika ny ankizy dia mampifandray ny paska amin'ny atody miloko mamy sy fanomezana ary manafina tsara ny lamban'ny paska. Ny fikitihana ny rohy dia manokatra ny pejy mifanaraka amin'izany miaraka amin'ny maodely fandokoana momba ny lohahevitry ny Paka:
Paka sy Paska
Loko amin'ny atody Paska
Ny bunny paska manafina ny atody paska
Atody paska amin'ny ahitra
Manaova karatrao manokana ho an'ny Paska
Ny ankizy dia mitady atody Paska
Bunny paska, atody paska ary voninkazo
Miloko amin'ny bunin'ny Paska ao anaty harona Paska
Karatra Paska handokoana - Paska